Kan Gooni la yidhaahdaa waa fuley xiniinyo aan loo ogeyn oo afka in uu ku ciil-baxo ay kaga soo soo hadhay. Gaar ahaan mar hadaanu maanta waxba ka qaadi karin SNM iyo dowladeedii ay dhistey ee Somaliland.
Waana nin aad ka adkaatey, siyaasad ahaan, mar haddaad dowladiisii xaaranta aheyd ee Afweyne aad maskax iyo xeelad aad ku qalibtey. Afweynana ay nafti bidey in uu laajinimo ku dhinto.
Taas taariikhda gashey ayaa cunaha u mari la. Oo maanta ma jiro nin SNM ku abtirsada (ama ku abtirsan jirey) oo "fuleynimo" darteed dalkiisii looga eryadey, dabadeedna laajinimo ku dhintey isaga oo dibad wareeg ah.
Ku darsoo, maantana, kii inaadeerkii ahaa ee Afweyne adeerka u ahaa ee Ina Farmaajo la yidhaaho waa "marti-dumar", oo rag uu gabadhooda uu qabo ayuu hoos fadhiyaa. Haddii kale sidii adeerkii Afweyne ayaa Xamar looga soo eryi karaa haddi ragga magaaladda iska lehi ay taas gartaan.
Taasina waa mid kale oo dhibeysa, kan Gooni layidhaahdo, oo maanta intaas ayey awoodiii tolkiis ay le-eg tahay.
Hargeysa iyo Somaliland kuwa jooga ee reerkan u dhashay, ee Gedo ka yimidna, waa "laajiyiin marti-ah" oo indhaha foorariya marka aad ku tidhaahdo: "Waar maxaad tidhi".
Intaas oo "bahdilid" ahna waxaa u sii dheer in Dhulkii uu kasoo jeeday ee Gedo ahaana, Kenya ayaa sidey doonto ka yeesha oo waa "lahayste". Marka kalana Ethiopia ayaa xukunta gobolkiisa, siddii ay aheyd in muddo ahba.
Markaas halkan SOL waxa uu u yimaadaa in afka ku ciil baxo oo uu SNM ku rafto. Maadaama uu u arko in ay iyagu ka masuul yihiin waxaas oo "nasiib-darro taariikhiyan" ah iyo mid siyaasadeedba oo ku habsatey reerkiisa.
Kan kale ee kadaba ciyiya isagu waa "ambad af-garanwaa" ah oo baydhaba habow kasoo noqdey. Raganimo-na ka qaawan, maadaama inaadeertiisii Bay iyo Bakool joogtey ay rag kale oo Amxaaro ahi ay hortiisa ku heystaan. Somaliland-na waxa uu u arkaa in ay ceebeysay. Oo taas ayaa keentay in uu habaaro, habeen iyo maalin.
Sababta oo ah markii lakala baxay sanadkii 1991 ninkii iyo reerkii "Soomaalinimadda" ku dhuuman jirey ee ay u aheyd "maro-cawradiisa-qarisa", ama "bafta-huwan-ah" oo "reerka asturta", waa la arkay. Waxaa kaloo la arkay ninkii iyo reerkii isku filnaadey ee qarankii ka-maarmey. Ama Soomaali tusey in ay ka maarmi karaan qaranimadaas haligantey. Oo ay mid ay iyagu leeyihiin oo gaar ah ay dhisan karaan.
Taas ayaa gubeysa isaga. Oo Somali maxamed oo dhan ayaa aragtey ninka iyo reerka Soomaali u liita dadka ay yihiin ee ay noqdeen iyo gobollada ay kasoo jeedaan.
Kuwaas oo ah tolka "Tuugsiga isugu habar-wacda" ee Baydhaba kasoo jeeda. Isla-markaana ah kuwa raganimadda ka "Dhufaanan". Oo Qarankii Soomaaliyeed-na uu u ceeb qarin jirey. Maadaama ay yihiin kuwaas ay maanta ay dantu ku khasabtey in Gumeysiga xabashidda ah iyo Jihaadi indho'la ay dhulkooda gumeystaan ama xukumaan.
Markaas, kan "cows-iyo-biyo-noolka-ah" ah waa hacoo taariikha iyo siyaasadda ambadka ka ah, ee waxba haka soo qaadin naxligiiisa uu halkan kaga ciyo.
"......Tanac-tanactu waa Ina-Gumeed Tamaradiis.
Dhabac-Dhabac iyo Dhakhleyntu waa Dhoohane dhufaanan dhaxalkiis.
Huu-haaleyntu waa hibadii mahante iyo hacoo hiil-hinaasey aanse haykal iyo hanasho u laheyn.
Jab-taariikhiya iyo Jeer lagula korey, oo waliba jeedal lagugu janjaamiyey, waa jawaabtaad jaalle la tahay.
Anakuna waa gayaan guuleystey iyo garasho guurtiyeed.
Marna waa gaashaan bir ah iyo gaadh dable Ah.
Marka xigana waa guri-ayaan ah iyo calan gaar ah oo guudka noo sudhan......."
Back in the old days of 19th century US's Southern's antebellum era, with its chattel slavery, the system that was there had a two version of "Negro Classification".
One was the pampered House Negro and the other was Field Negro. And things being in this way, invariably meant that the "House Negro" used developed a deep attachment to the very system that used oppresses him. And he used to have a pronounced (almost absurd) loyalty to his then master.
Hence one gets the impression something of a similar "psychological traits" may be in evidence in here.
Or at least it could be afoot in here. In particularly the sheer "unrequited attachment" in which some in here are displaying for the political action of Villa Somalia's current occupant. Given the knowledge we have of how lowly some of the clannish elites of the old "Faqash brigade" used to treat these folks from Bay and Bakool region.
House negro waxaa lagu matali karaa dad xoriyadooda la siiyay nus qarni ka hor, oo wali guri ingiriis, aqoonsi, u hor taaggan ayadoo qabow ba'ani dhacayo
Aqoonta guud haddaad jaahil ka tahay, taariikh-na aad ka madhan tahay, af-laydhisna aad caado u leedahay, tan halkan ku qoran ayey ku dhaxalsiisaa.
Taas-na waxaan uga jeedaa haddii "citiraaf-raadis" umad xor ahi ay gucle ugu jurto si ay dalkoodii ay qoriga kaga dhacsadeen daaquuq aad ku "mataasho" wax u eg nin-gumeysi ku jira oo la haysto oo guri kale fadhiya, waxa ay markhaati ka tahay oo qudha sida ay aqoontu ugu yartahay iyo sida aqligu uga fooraro, ninka doodaas raqiiska ah ku hadaaqa.
Laakiin, waa sidii aan horey u sheegay oo waa "dhaqankii Ina-Gumeed dhufaanan" oo afka-ku-ciil-baxaya ninka doodaas ka dhawaajiyey. Gaar ahaan markii uu u caal waayey wax kale oo uu qabto.
Sababta oo ah, maanta, dhulkiisii ayaa isaga lagu gumeystaa, oo waatan Gedo kufsiga hadhka-cad lagu hayo.
Ninka halkaas kasoo jeeda, oo ah nin xaaladiisa lagu "mataali" karo nin ku dhex jira "bahdilistii" loola dhaqmi jirey "Field Negro", maadaama gobolkiisii Gedo ahaa lagu gumeysto isaga, "gabadhiiisiina hortiisa lagu kufsanayo", ayaa nin dunida "citiraaf-dowladeed" ka raadsanaya si ay xornimadiisa uu heysato ay u noqoto "dowlad-sharci-ah" ayuu wax ka sheegaya.
Wakaas "aqliga tanac-tanacda" ah oo mid "habow-ambad" ahi uu ku hadaaqo.